Nwoke Britain nwere ike ịbụ onye “a gwọrọ” nke izizi | Akụkọ akụrụngwa
Otu ọgwụgwọ nnwale e mechara kwuo na ọ gwọrọ otu nwoke dị afọ 44 nke si mba Britain butere ọrịa HIV. Achọpụtara ma na-achọpụta nje virus na-enweghị ikike mmadụ dịka onye isi na-ebute ọrịa AIDS na France site n'aka Dr. Luc Montaner laa azụ na 1983. Kemgbe ahụ ọgụ a na-achọ inweta ọgwụgwọ akwụsịbeghị, mana ọ ka nọ dị ka ọrịa kansa, ọrịa ụdị nke anaghị odi ka ichoro ya. Otú ọ dị, na mba ndị dị ka Spain ọ ghọọ ọrịa na-adịghị ala ala kemgbe, n'ihi ọgwụ, ndụ mmadụ nwere ike ịkwado, n'ihi ya, a naghị ewere ya dị ka ọrịa na-egbu egbu.
Dị ka National Institute for Health Research Office maka Clinical Research Infrastructure, otu ndị a gbara ajụjụ ọnụ Sunday TimesHa enweela ọganihu dị ukwuu, ruo n’ókè na onye Briten bụ mmadụ mbụ nwere nje HIV. Ọgwụ ndị e ji alụso nje HIV ọgụ na-egosi na ha dị irè ma ha anaghị agwọ ọrịa, na nke a nwere ike ịbụ ihe dị mkpa dị mkpa na akụkụ nke ọgwụgwọ ọgwụgwọ doro anya, ọ bụ ezie na anyị enweghị obi abụọ na afọ ndị mbụ nwere ike bụrụ usoro ọgwụgwọ na-enweghị atụ, ọ bụghị ịkọwa usoro ntanetị ndị ọzọ dị n'ihu iji nwee ike iwepụ ya ahịa .
Ezubere usoro ọgwụgwọ a iji sachapụ nje virus niile metụtara HIV.
Nke ahụ bụ nkwupụta nke Prọfesọ Sarah Fidler, onye otu Perlọ akwụkwọ Imperial College London. Ọgwụgwọ ahụ ka bụ nnwale, agbanyeghị na dịka nkọwa nke nyocha ahụ si dị, nwoke ahụ "gwọrọ" nje HIV anaghị egosipụta nsogbu ọ bụla mgbe ọ gachara, ya mere ọgwụgwọ ya ga-abụ otu nzọ ụkwụ site na -eche na ọ dị irè. Agbanyeghị, ha na-ekwusi ike na ha ga-aga n'ihu na nnwale na ule, ebe ọ bụ ha na-ebu amụma na ha agaghị enwe ike iji ọgwụ ahụ rụọ ọrụ nke ọma ruo ihe dị ka afọ ise.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nwoke Britain nwere ike ịbụ onye mbụ a gwọrọ '' HIV ''
Nokia D1C, ama gam akporo ama abanyela na Geekbench